Mpanamboatra sy mpamatsy tavoahangy plastika ambongadiny | Copak
Orinasa orinasa COPAK any Shanghai LTD dia manana tsipika famokarana mihoatra ny folo ho an'ny tavoahangy PET sy PLA. Miaraka amin'ny rafitra fitantanana kalitao henjana sy rafitra fitantanana fahasalamana sy fiarovana amin'ny asa, ny orinasanay dia efa anorinasa vita amin'ny tavoahangy plastika nandritra ny taona maro. Izahay dia tena mamokatra kaopy PET, fitoeran-tsakafo PET, tavoahangy PET ary vokatra PLA.
COPAK dia nampiditra fitaovana matanjaka ara-teknika mandroso. Misy fantsom-panafody maro hafa, milina fanontana mandeha ho azy. Fonosana mifanaraka amin'ny fenitra fonosana fanafody mba hiantohana ny fahasalamana sy ny fiarovana.
Mitovy amin'ny orinasa vita amin'ny tavoahangy plastika, COPAK dia nanangona traikefa manan-karena tamin'ny famokarana nandritra ny taona maro.Fehezinay fatratra ny kalitaon'ny vokatra amin'ny alàlan'ny rafitra fitantanana siantifika. Mino ilay orinasa fa ny kalitaon'ny vokatra dia ny ra vaovao hitazomana ny ozinina.
Ny fitazonana ny fifanarahana sy ny fitazonana ny trosa dia ny fanoloran-tenanay ho an'ny mpanjifa mandrakizay. Ny kalitaon'ny vokatra azo antoka ary ny serivisy aorian'ny varotra no tanjonay maharitra. Manantena izahay fa hivoatra
miaraka amin'ireo mpanjifa taloha mba hiara-hitombo amin'ny mpanjifa vaovao ary handray an-kitsim-po ireo mpanjifa vaovao sy taloha handresy toe-javatra mandresy ary hamorona ho avy mamiratra.
COPAK Packaging dia manangona vola amin'ny haitao, olona ary fizotrany izay manome vahaolana famonosana plastika amin'ny indostria maro karazana. Avy amin'ny laboratoara fanavaozana anay izay ahafahantsika manangana sy manandrana fonosana vaovao haingana kokoa amin'ireo sehatra fanamboarana vaovao izay manitatra ny fahafahan'ny vokatra sy ny sakany, ny fanavaozana no ivon'ny zavatra rehetra ataontsika. Izahay izao no tsara indrindraozinina tavoahangy plastika.
Ny kalitao no laharam-pahamehana indrindra amin'ny copak orinasa vita amin'ny tavoahangy plastika. Ny ekipanay dia natokana hanomezana antoka fa ny mpanjifa rehetra dia mahazo ny fonosana kalitao ilain'ny vokatra sy mendrika azy ireo. Hatramin'ny fenitra sy ny fizotrantsika ka hatramin'ny injenieranay sy ny famokarana, dia nasiana fanamarinana sy mizana marobe mba hamaritana fa ny tavoahangy rehetra dia novokarina amina kalita avo indrindra.
Teo aloha: Petaka plastika PET miaraka amin'ny sarony
Manaraka: Tavoahangy ranom-boasary
tavoahangy PET namboarina